Bluetooth 5 okpukpu abụọ nyefe ọsọ na ọtụtụ ihe ndị ọzọ | Gam akporosis
Na ịrị elu nke ngwaọrụ ejikọrọ Ebe ọ bụ na ọtụtụ na-eji njikọ Bluetooth, anyị chọrọ nnukwu mmụba na ikike, ọsọ na mkpuchi ka ekwentị anyị wee ghara ịta ahụhụ nke ukwuu mgbe anyị ga-ejikọ ha na otu n'ime ngwaọrụ ndị ahụ anyị nwere ike ịmara site na smartwatch ma ọ bụ mgbaaka ọrụ.
Bluetooth SIG ekwuputala a mbipute ọhụrụ nke ikuku ikuku nke na-abịa okpukpu abụọ nke nnyefe mbufe, na ugboro anọ mkpuchi na 800% na ikike. Ewezuga mmelite nke usoro a dị mkpa maka njikọ nke ụdị a, ọ gụnyere "Beacons" ma ọ bụ mgbama nke enwere ike jikọọ na ngwaọrụ ọ bụla iji zipu ozi.
Bluetooth 5 ga-abata mbubreyo 2016 ma obu mmalite 2017 Na, na nkenke, ọ ga-aka mma na atụmatụ ya niile na ọsọ mbufe dịwanye mma site na abụọ, mkpuchi ka mma site na anọ yana ikike ịnyefe data mụbara site na 800%. Ihe ọ pụtara bụ na Bluetooth 5 ga-ekwe ka ngwaọrụ dị iche iche nwee ike ikwurịta okwu nke ọma mgbe ha nọ n'ime, n'èzí, na ọbụna site na mgbidi.
Anyị nwekwara ike ịgụnye na njirimara ndị a niile mmelite na arụmọrụ na obere oge nchere. Otu n'ime isi okwu ọjọọ nke ụdị nkwukọrịta a n'etiti ngwaọrụ bụ na ọ dị nwayọ nwayọ iji nyefee faịlụ nke ụfọdụ ibu. Kedu ihe ga - eduga anyị na nke ahụ mgbe ejikọtara ọtụtụ ngwaọrụ anyị agaghị ahụ ọnya ndị ahụ na njikọ ahụ.
Typedị njikọ dị mkpa ka ngwaahịa ndị ahụ niile ejikọtara na ekwentị gị nweta ọrịre ka mma ma gbasawanye nke ukwuu ka anyị jiri ha, ebe ọnụ ọgụgụ ka ukwuu dabere na Bluetooth. Ya mere, Bluetooth 5 na-atụ anya ka May mmiri maka melite Ntanetị nke Ihe, otu n'ime oghere nke ọtụtụ ụlọ ọrụ na-agbakwunye mgbalị na ọtụtụ ntinye ego.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Mara ọkwa Bluetooth 5 na ugboro abụọ na-agba, ugboro anọ mkpuchi na 800% ọzọ ikike
[Mgbọrọgwụ] Otu esi esi wụnye Samsung Galaxy S7 Game Launcher na Samsung Galaxy S6 gị